Jumlada CNC soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha | Saxnimada QY
Ku soo dhawoow inaad nala soo xidhiidho: viky@qyprecision.com
Socodka gaarka ah
Adeegga Mashiinka ee CNC
Adeegga leexashada CNC
Adeegga Milling CNC
Geedi socodka jilitaanka dhinta
Codsiga Warshadaha Caafimaadka
Qaybaha Warshadaha Baabuurta
Codsiga Warshadaha Warshadaha
Qalabka saxda ah
Dhamaystir dusha sare
Waa maxay Adeegga Mashiinka ee CNC?
Adeega mashiinada CNC waa nidaam wax soo saar oo ku habboon warshado kala duwan oo ay ku jiraan baabuurta, hawada sare, dhismaha, iyo beeraha, oo awood u leh inay soo saaraan badeecooyin kala duwan, sida xargaha baabuurta, qalabka qalliinka, matoorada diyaaradaha, iyo agabka gacanta iyo beerta. iwm.
Nidaamku waxa uu ka kooban yahay dhawr hawlgal oo kala duwan oo kombuyuutar lagu maamulo mashiinada- oo ay ku jiraan makaanikada, kiimikooyinka, korontada, iyo hababka kulaylka - kuwaas oo ka saaraya walxaha lagama maarmaanka ah ee qaybaha si loo soo saaro qayb ama badeecad gaar loo habeeyay.
Waa maxay CNC Machining?
Mashiinka xakamaynta tirooyinka (mashiinka xakamaynta tirooyinka) waxaa loola jeedaa habka habka loogu talagalay qaybaha qalabka mashiinka CNC. Xeerarka habraaca ee mishiinada CNC-da iyo farsamaynta mishiinada dhaqanka guud ahaan waa joogto, laakiin isbedelo la taaban karo ayaa sidoo kale dhacay.
Habka mashiinada isticmaala macluumaadka dhijitaalka ah si loo xakameeyo barokaca qaybaha iyo qalabka. Waa hab wax ku ool ah oo lagu xalliyo dhibaatooyinka qaybaha kala duwan, kooxo yaryar, qaabab adag, saxsanaan sare, si loo gaaro wax-ku-oolnimo sare iyo farsamaynta otomaatiga ah.
Mashiinka CNC waa nooc ka mid ah mishiinada kombuyuutarku gacanta ku hayaan, hadday tahay kombiyuutar gaar ah ama kombuyuutar ujeedo guud ah, waxa si wada jir ah loogu yeedhaa nidaamka CNC. Tilmaamaha nidaamka xakamaynta nambarada waxaa isku dubbariday barnaamij-sameeyaha iyadoo loo eegayo walxaha qaybaha, shuruudaha habaynta, sifooyinka mashiinnada, iyo qaabka wax-barid ( luuqadda kontoroolka tirada ama calaamadaha) ee uu nidaamku qoray. Ama jooji macluumaadka si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa kala duwan ee qalabka mashiinka. Marka barnaamijka habaynta qaybaha uu dhamaado, mishiinadu si toos ah ayay u joogsan doonaan. Nooc kasta oo ka mid ah mashiinnada CNC, haddii aysan jirin wax gelinta barnaamijka nidaamka CNC, mashiinnada CNC ma shaqeyn karaan.
QY Precision, injineeradayada iyo farsamayaqaanadeena waxay khibrad u leeyihiin hawlgalka mashiinka CNC, waxayna u farsamayn karaan qaybahaaga baahida aad u degdeg badan.
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee CNC Machining.
Mashiinnada CNC waxay doortaan qaybo diyaaradeed oo leh profiles adag sida walxaha wax lagu farsameeyo tan iyo bilowgii, taas oo fure u ah xallinta dhibaatada hababka wax-qabadka caadiga ah. Muuqaalka ugu weyn ee mashiinnada CNC waa isticmaalka cajalad la feeray (ama cajalad) si loo xakameeyo qalabka mashiinka si toos ah loogu shaqeeyo. Sababtoo ah diyaaradaha, gantaalada, iyo qaybaha matoorka waxay leeyihiin sifooyin kala duwan: diyaaradaha iyo qaybaha gantaalada, cabbirka qaybaha waaweyn, iyo qaababka adag; Qaybaha mishiinka, cabbirrada qaybaha yaryar, iyo saxnaanta sare. Sidaa darteed, mashiinnada CNC ee ay doorteen waaxaha wax-soo-saarka diyaaradaha iyo gantaallada iyo waaxaha wax-soo-saarka matoorka ayaa kala duwan. Soo saarista diyaaradaha iyo gantaalaha, mashiinnada wax-shiidka ee waaweyn ee CNC oo leh koontarool joogto ah ayaa inta badan loo adeegsadaa, halka wax soo saarka mashiinka, labadaba mashiinnada CNC-da-koontaroolada iyo mashiinnada CNC-koontaroolada (sida mashiinnada qodista CNC, mashiinnada caajiska ah ee CNC, xarumaha mashiinnada, iwm) loo isticmaalo.
QY Precision waxay khibrad tobanaan sano ah u leedahay adeega Machining CNC.
Hore: Alaabooyinka Cusub ee Kulul Adeegyada Kabaynta Aluminium Dhimashada - Geedi socodka tuurista Dhimashada - Saxnaanta QY
Xiga: CNC Milling
Qaybaha Mashiinnada Aluminiumka
Qaybaha Mashiinnada Naxaasta ah
Qaybta Mashiinka Cnc
Qaybta Mashiinka Saxda ah
Ganacsigeena Ugu Weyn: Adeegga Mashiinka CNC, oo ay ku jiraan CNC Qaybaha leexashada,
Qaybaha wax-shiidka ee CNC, Qaybaha qodista/shiidida/Shaabadaynta CNC iwm.
Dhismaha 6-aad, Beerta Warshadaha ee Yingtai, Dalang, Longhua, Shenzhen, Shiinaha
Taabo Better Better Business
Qofka xiriirka ah ee Vicky Wang.